Ny fikolokoloana tarehy sy ny vatana ao an-trano - Inona avy ireo dingana tokony harahina? | Bezzia
Susana godoy | 13/10/2021 12:00 | beauty
Betsaka ny loko, ny vokatra ary ny dingana tokony hataontsika raha te hikarakara ny hoditra isika ary hanome azy moramora kokoa io fikarakarana io. Izany no antony iray amin'ireo dingana ireo tsy maintsy ho ny tarehy sy ny fikolokoloana ny vatana ao an-trano izany. Satria manana ny zavatra tena ilaintsika izy ireo mba hampisehoana vokatra mahaliana kokoa.
Fantatrao ve hoe inona marina ny fikolokoloana tarehy sy vatana? Hampahafantarinay ny zavatra entin'ny tsirairay amintsika ary mazava ho azy, ny dingana hahazoana vokatra tsara kokoa noho ny nantenaintsika. Aza adino izay rehetra manaraka satria afaka manao an'izany ao an-trano ianao dia hahagaga anao izany.
1 Ilaina ve ny fikolokoloana tarehy sy vatana?
2 Ny fanadiovana no dingana voalohany amin'ny hodintsika
3 Vokatra manokana ho an'ny hoditrao
4 Ny crème hydrate izay tsy misy tsy ampy ho famenony ny fikolokoloana ny tarehy sy ny vatana ao an-trano
Ilaina ve ny fikolokoloana tarehy sy vatana?
Mazava ho azy fa ilaina ny fikolokoloana tarehy sy vatana. Fa maninona SATRIA Amin'ity fihetsika tsotra ity dia hataontsika lalina kokoa ny fanadiovana, hofoanana ireo sela maty ao anatin'ny indray mipy maso fotsiny, mba hahafahan'ny hoditra miverina mamerina indray ary miseho milamina sy salama indray. Azo antoka fa ny fahalalana an'io dia ho tsapanao fa ny maha-zava-dehibe ny fihetsiky ny hatsarana mihanaka toy izao. Satria raha tsy manao veloma ny sela maty isika dia tsy hanome fotoana ny hodintsika hody intsony. Noho izany, hanao veloma ny tsipika tsara isika nefa koa ny kilema.
Ny fanadiovana no dingana voalohany amin'ny hodintsika
Na dia tsy ny farany na ny dingana tokony hataontsika fotsiny aza izany dia mila mitandrina tsara kokoa isika amin'izany. Satria ny hoditra tena madio dia afaka mahazo ny fototra iorenan'ny fanarenana tsaratsara kokoa. Ka mba hanadiovana azy dia tsy misy toa ny filokana amin'ny vokatra fototra ihany koa ny gel manadio na rano mikraoba. Nanjary iray amin'ireo vokatra be mpividy indrindra io, satria tena manadio amin'ny lalina ary mety amin'ny famelana ny hoditra mihosotra. Raha tsy manadino izany amin'ny fihetsika tokana dia afaka manao veloma ny makiazy ianao. Raha tsy hadino fa ho tonga lafatra ihany koa ho an'ny hoditra mora tohina indrindra.
Vokatra manokana ho an'ny hoditrao
Mba tsy hanasarotana ny tenantsika loatra ary ho haingana kokoa na mazava kokoa ny fikolokoloana ny tarehy sy ny vatana, dia afaka mampiasa ireo vokatra tena manokana foana isika. fotsiny tsy maintsy ataontsika amin'ny hoditra izany ary indray mandeha ao dia tsy maintsy manao otra boribory malefaka ihany isika ka ny vokatra dia afaka miditra tsara kokoa any amin'ny faritra tsirairay. Marina ihany koa fa ity dingana ity dia azo atao amin'ny vokatra ananantsika rehetra ao an-trano toy ny yaourt sy ranom-boasarimakirana vitsivitsy, ohatra. Marina fa rehefa misafidy ireo vokatra novidintsika isika dia fantatsika isaky ny tranga ny habetsahana na ny firafitra ilaintsika.
Miaraka amin'izany famaranana exfoliating izay manana vokatra sasantsasany afaka ahitantsika vokatra tsara ihany koa. Koa satria ny loto dia hesorina saika tsy nahy. Zavatra iray izay ilaina sy ilaina koa raha te-hahita indray isika hoe ahoana no mbola tsy miraikitra ny hoditsika amin'ny halemem-panahy.
Ny crème hydrate izay tsy misy tsy ampy ho famenony ny fikolokoloana ny tarehy sy ny vatana ao an-trano
Ny crème moisturizer dia iray amin'ireo mpiara-miasa lehibe amintsika ary fantatray izany. Noho izany, tsy misy toa ny manararaotra isaky ny mampihatra azy io. Na dia zava-dehibe amin'ny maraina sy isan-kariva aza ny fihazonana ny hoditra hodi-biby, amin'ity tranga ity vao mainka. Satria aorian'ny fanaovana ny peeling dia ho lavorary ny manandrana mampitony ny hodintsika. Noho izany, tsy maintsy ampiharintsika ilay fantatsika fa tsara amin'ny karazana hodintsika ary dia izay. Miaraka amin'ny vokatra mety, ao anatin'ny dingana telo monja dia ho afaka hanao ny fikolokoloana ny tarehy sy ny vatana amin'ny fomba tena mahafinaritra. Indray mandeha isan-kerinandro dia ho hitanao faingana ny fanovana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ahoana ny fomba fanaovana peel tarehy sy tarehy tsara ao an-trano